Podcasting dia mitohy mitombo amin'ny lazany sy ny fanonerana vola | Martech Zone
Podcasting dia mitohy mitombo amin'ny lazany sy ny fanonerana vola
Alarobia, Septambra 12, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Nahazo fisintomana 4 tapitrisa teo ho eo tamin'ny fizarana 200+ izahay podcast marketing hatramin'izao, ary mitohy mitombo. Be loatra ka nandoa vola tamin'ny studio podcast. Izaho dia ao anatin'ny dingana famolavolana a vaovao studio izay mety hifindrako any an-tranoko satria hitako fa mandray anjara na mihazakazaka podcast marobe aho.
Hatramin'ny niandohany tamim-panetren-tena tamin'ny taona 2003, ny podcasting dia nanjary hery tsy azo sakanana amin'ny varotra atiny ary tsy mampiseho mariky ny fijanonana - ny isan'ireo podcast miasa dia nisondrotra hatramin'ny 2008. Jon Nastor
Statistika Podcasts 2018
Ireo mpihaino Podcast dia mihaino fampisehoana 7 isan-kerinandro, izay tafakatra 40% hatramin'ny 2017
Misy podcast mavitrika 550,000 amin'ny fiteny 100 mahery misy fizarana 18.5 tapitrisa hita an-tserasera
Ny karazany 5 amin'ny podcasting voalohany dia ny fiarahamonina & kolontsaina, orinasa, hatsikana, vaovao & politika, ary fahasalamana
64% amin'ny mponina amerikana no mahalala io voambolana io podcasting
44% amin'ny mponina amerikana no nihaino podcast, 26% mihaino podcast isam-bolana, 17% isan-kerinandro, miaraka amin'ireo mpankafy mazoto 6%
Ny demografika lehibe ho an'ireo podcast dia ankizy 25-34 taona, matetika demografika sarotra tratrarina amin'ny doka
Ireo mpihaino Podcast dia 45% kokoa no manana mari-pahaizana eny amin'ny oniversite ary 37% dia toa manana $ 100,000 isan-taona na mihoatra
Inona no manova fa malaza be ny Podcast?
Mivadika taona vitsivitsy ary mandevona podcast dia asa sarotra. Raha nanana fitaovana iOS ianao dia mila mametaka sy mampifandray ny fitaovana ampiasainao amin'ny iTunes aorian'ny fisoratana anarana amin'ny podcast tianao. Na izany aza, rehefa nandroso ny fitaovana ary nanjary mahazatra ny fifandraisana broadband, mivantana podcast dia nanjary fanao. Apple dia manana ny fampiharana podcasts, ary misy koa Stitcher, TuneIn, BlogTalkRadio, ary ny fampiharana finday dia afaka mampifangaro mpilalao mora foana.
Ankoatry ny fihainoana mandritra ny dianao mandeha maraina na amin'ny bisikileta amin'ny tolakandro, ny fampidirana finday avo lenta amin'ny finday avoakan'ny finday sy fiara dia nahatonga ny fihainoana podcast nilaina tamin'ny dianao maraina sy ny tolak'andro. Raha ny hevitro, mino aho fa io no faritra lehibe indrindra amin'ny fitomboana amin'ny podcast orinasa.
Tsy ny fihenan'ny fihinanana ihany no miova, fa ny fihetsika koa. Tahaka ny hipetrahan'ny olona sy hijerena an'i Netflix mandritra ny ora maro, hitantsika fa ny mpihaino antsika dia hihaino ora amin'ny podcast antsika mandritra ny fotoana iray Atambaro amin'ny fenitra interface interface vaovao amin'ny fiara 2016 ity izay afaka mihinana podcast… ary hiroso ny audio on-demand raha mbola tsy hitantsika teo aloha!
Ao amin'ny famokarana lafiny, podcasting dia lasa mora kokoa. Ilaina ny mitaky studio manamarina feo, mikrôfôna lafo vidy, ary mixer ho an'ny firaketana… avy eo ampitaina amina tonian-dahatsoratra handefasa sy hikajiana. Vao haingana aho no nanao podcast teny an-dalana niaraka tamin'ny a Zoom H6 recorder ary andiana Kitiho ny mikrô SM58 - ary mahatalanjona ny hazavan'ny podcast. Heck, afaka manomboka amin'ny Fampiharana podcast vatofantsika, ary miasa tsara ny headset Bluetooth.
Ny fanjifana haino aman-jery dia mampiseho ny fiovan'ny teknolojia sy ny paradigma vaovao. Ny fampiakarana finday mihamitombo ho toy ny 'écran voalohany', ary koa ny fiakaran'ny endrika atiny hafa, toy ny podcast sy ny atiny 'bingeable' avy amin'ny serivisy horonantsary on-demand dia manimba ny angano fa fohy kokoa ny elanelan-tsaintsika. Tom Webster, filoha lefitra misahana ny tetikady an'i Edison
Monetization Podcasting: mitranga izany
Taorian'ny podcasting nandritra ny taona maro dia nahazo karama mendrika ihany koa aho tamin'ny alàlan'ny mpanohana sasany (misaotra AdvertiseCast). Satria mety hihaino 10k + mandritra ny volana vitsivitsy ny podcast-ko, mandoa dolara an-jatony isan-fizarana ny mpanao dokambarotra. Mety tsy dia toa be loatra izany, saingy manome fotoana sarobidy ny fandaharam-potoana, ny firaketana ary ny famoahana ireo podcast. Ary tsy toy ny lahatsoratra sy horonan-tsary, ny podcasting dia mahafinaritra amin'ny doka satria manana ny sain'ny mpihaino ianao. Mazava ho azy, azoko antoka fa misy ifandraisany sy sarobidy amin'ny mpihaino ahy koa ny dokam-barotra amiko - heveriko fa lakile izany. Tsy hohenoinao ny fiezahako mivarotra kidoro amin'ny tranoko fanadihadiana amin'ny marketing!
Raha tsy misy podcast malaza ao amin'ny indostranao dia izao no fotoana hanombohana! Avy eto daholo no misy azy!
Tags: 2018fikarohana an'i EdisonIABPodcast MarketingmusicoomphNielsenatiny pasifikasokajy podcastfihinanana podcastfitomboan'ny podcaststatistika podcaststatistika podcaststudio podcastpodcastingfitomboana podcastingstatistika podcastingpwc
Ahoana ny fomba hanatsarana ny ankamaroan'ny biraonao amin'ny fifindra-monina finday
Mandra-pahoviana no hilahatra amin'ny valin'ny fikarohana Google?